Olee Otú M Ga-esi Na-agwa Papa M na Mama M Okwu
GỤỌ NKE Abbey Abkhaz Abui Acholi Afrikaans Albanian Alur American Sign Language Arabic Argentinean Sign Language Armenian Assamese Attié Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Dairi) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Biak Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Bolivian Sign Language Boulou British Sign Language Bulgarian Bété Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuukese Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Cuban Sign Language Czech Damara Dangme Danish Dayak Ngaju Digor Drehu Dutch Ecuadorian Sign Language Edo Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Finnish Sign Language Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Gokana Greek Guarani Gujarati Gun Guéré Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Hungarian Sign Language Iban Ibanag Ibinda Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kabyle Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Konkani (Roman) Korean Korean Sign Language Kosraean Krio Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mexican Sign Language Mixe Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Palauan Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Pidgin (Cameroon) Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (European) Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Southern Greece) Rotuman Runyankore Russian Russian Sign Language Rutoro Samoan Sangir Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tiv Tlapanec Tojolabal Tongan Toraja Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vezo Vietnamese Vietnamese Sign Language Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yacouba Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zimbabwe Sign Language Zulu
Ọ bụrụ na gị na papa gị na mama gị na-adị ná mma, ihe ga na-agara gị nke ọma.
Chegodị banyere ihe atụ a: N’otu abalị Wednezdee, otu nwa okorobịa dị́ afọ iri na asaa aha ya bụ Geoffrey rụchara ọrụ o kwesịrị ịrụ n’ụlọ, chọzie izurutụ ike. Ọ gbanyere tiivi, gaa nọrọ n’oche na-amasịkarị ya.
Ozugbo ahụ, papa ya batara, gbarụọ ihu, sị:
“Geoffrey! Gịnị mere i ji nọrọ ebe ahụ na-ele tiivi kama ịga nyere nwanne gị nwoke aka rụọ ihe onye nkụzi nyere ya ka ọ rụọ n’ụlọ? Ò nwekwadịrị mgbe ị na-eme ihe a gwara gị?”
Geoffrey amalite ịtamu, “Ọ bịakwala ọzọ.” O kwuru ya otú papa ya ga-anụ ya.
Papa ya bịara ya nso, sị ya, “Nwoke m, ị̀ sịrị gịnị?”
Geoffrey arọọ papa ya anya, maa ọsụ, sị: “O nweghị.”
Ezigbo iwe bịara papa ya. Ya ejiri iwe sị Geoffrey, “Esikwala otú ahụ agwa m okwu!”
Ọ bụrụ na ị bụ Geoffrey, olee otú ị gaara esi gwa papa gị okwu ka unu ghara ise okwu?
Ịgwa papa gị na mama gị okwu yiri ịnya ụgbọala. Ọ bụrụ na ị nyara ụgbọala ruo ebe ihe nọchiri ụzọ, ị ga-achọrọ ụzọ ọzọ.
DỊ KA IHE ATỤ:
Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Leah kwuru, sị: “Ọ na-esiri m ike ịkọrọ papa m ihe. Mgbe ụfọdụ, m ga-anọ na-akọrọ ya ihe, ya asị m, ‘Ewela iwe, ị̀ sịrị gịnị?’”
Ọ DỊKARỊA ALA, E NWERE IHE ATỌ LEAH NWERE IKE IME.
A. Iji olu ike gwa papa ya okwu.
Leah nwere ike iji olu ike sị papa ya: “Ihe a dị mkpa! Geenụ m ntị!”
B. Ịkwụsị ịkọrọ papa ya ihe ahụ.
Leah nwere ike kwụsị ịkọrọ papa ya nsogbu ahụ o nwere.
CH. Ịchọta oge ọzọ ka mma ọ ga-akọrọ papa ya nsogbu ahụ.
Leah nwere ike gakwuru papa ya n’oge ọzọ, kọọrọ ya nsogbu ahụ, ma ọ bụ dee ya edee nye papa ya.
Olee nke i chere Leah kwesịrị ime?
CHEGODỊ ECHICHE: Papa Leah na-eche ihe ọzọ. Ọ bụ ya mere na ọ chọpụtaghị na iwe na-ewe Leah. Ọ bụrụ na Leah ahọrọ Nke A, papa ya agaghị aghọta ihe mere o ji jiri olu ike gwa ya okwu. Ọ bụrụ na Leah ejiri olu ike gwa papa ya okwu, o nwere ike ọ gaghị eme ka papa ya gee ya ntị, ọ gaghịkwa egosi na ọ na-asọpụrụ papa ya. (Ndị Efesọs 6:2) O doro anya na ịhọrọ Nke A agaghị abara ya uru.
Ihe nọchiere gị ụzọ, ị ga-esi ụzọ ọzọ gawa ebe ị na-aga. Otú ahụ ka ị ga-esikwa chọta ụzọ ọzọ ị ga-esi gwa papa gị na mama gị okwu
Ịhọrọ Nke B nwere ike iyi ka ọ̀ kacha mfe, ma ọ bụghị ya kacha mma. N’ihi gịnị? Ọ bụ n’ihi na Leah chọọ ka nsogbu o nwere bie, o kwesịrị ịkọrọ ya papa ya. Papa ya kwesịrị ịma ihe bụ́ nsogbu ya ka o nwee ike inyere ya aka. Leah gbachi nkịtị, nsogbu ya agaghị ebi, papa ya agaghịkwanụ enyere ya aka.
Leah họrọ Nke CH, ọ pụtara na o kweghị ka ihe ọ bụla gbochie ya ịkọrọ papa ya ihe bụ́ nsogbu ya. Kama, ọ ga-agba mbọ gwa papa ya ihe bụ́ nsogbu ya n’oge ọzọ. Ma, obi nwere ike ịdị Leah mma ozugbo ma o kpebie ide ya ede nye papa ya.
O dee ya edee, o nwere ike ime ka o dee ihe niile ọ chọrọ ikwu. Papa ya gụọ ihe ahụ o dere, ọ ga-aghọta ihe ọ chọrọ ịgwa ya. O nwekwara ike ịghọtakwu ihe bụ́ nsogbu ya. N’ihi ya, Nke CH ga-abara Leah na papa ya uru. Ma Leah ọ̀ bịakwutere papa ya ma ò dere ya ede, ịhọrọ Nke CH pụtara na ọ “na-achụso ihe na-eweta udo” otú ahụ Baịbụl kwuru.—Ndị Rom 14:19.
Olee ihe ndị ọzọ Leah nwere ike ime?
Lee ma ị̀ ga-echeta ihe ọzọ Leah nwere ike ime ma dee ya n’okpuru ebe a. Dezie ihe o nwere ike ịkpata.
IHE BAỊBỤL KWURU GA-ABARA GỊ URU
“Sọpụrụ nna gị na nne gị.”—Ndị Efesọs 6:2.
“Ka okwu unu dịrị n’amara mgbe niile.”—Ndị Kọlọsi 4:6.
‘Bụrụ onye na-anụ ihe ngwa ngwa, onye na-adịghị ekwu okwu ngwa ngwa, onye na-adịghị ewe iwe ngwa ngwa.’—Jems 1:19.
EKWULA IHE PAPA GỊ NA MAMA GỊ GA-AGHỌTAHIE
Cheta na ọ bụghị mgbe niile ka ihe i kwuru na ihe papa gị na mama gị chere na i kwuru na-abụ otu.
Ka e were ya na papa gị na mama gị jụrụ gị ihe mere iwe ji ewe gị. Gị asị ha, “Achọghị m ikwu banyere ya.”
Ma, ihe ha ga-aghọta bụ: “Agaghị m akọrọ unu n’ihi na atụkwasịghị m unu obi. Ọ bụ ndị enyi m ka m ga-akọrọ ya. Ọ bụghị unu.”
Weregodị ya na e nwere nsogbu gị na ya na-alụ, mama gị ma ọ bụ papa gị achọọ inyere gị aka. Gị asị ya: “Enyela onwe gị nsogbu. Nsogbu a akarịghị m.”
Gịnị ka papa gị na mama gị nwere ike ịghọta?
Olee otú ka mma i nwere ike isi kwuo ya?
Mgbe ọzọ ọ dị m ka m ghara ịkọrọ papa m ma ọ bụ mama m ihe, gịnị ka m ga-eme?
Ọ bụrụ na papa m ma ọ bụ mama m asị na m ga-agwarịrị ya ihe m na-achọghị ịgwa ya, gịnị ka m ga-ekwu?
AJỤJỤ NKE 1 Olee Ụdị Onye M Bụ?
AJỤJỤ NKE 2 Gịnị Mere Otú M Dị Ji Echu M Ụra?
AJỤJỤ NKE 3 Olee Otú M Ga-esi Na-agwa Papa M na Mama M Okwu?
AJỤJỤ NKE 4 Olee Otú M Ga-esi Mezie Ihe M Mejọrọ?
AJỤJỤ NKE 5 Gịnị Ka M Ga-eme ma A Chọwa M Okwu n’Ụlọ Akwụkwọ?
AJỤJỤ NKE 6 Olee Otú M Ga-esi Merie Nsogbu Ndị Ọgbọ M Na-enye M?
AJỤJỤ NKE 7 Gịnị Ka M Ga-eme ma Mmadụ Chọọ Ka Mụ na Ya Nwee Mmekọahụ?
AJỤJỤ NKE 8 Gịnị Ka M Kwesịrị Ịma Banyere Idina Mmadụ n’Ike?
AJỤJỤ NKE 9 M̀ Kwesịrị Ikwere na E Keghị Mmadụ Eke?
AJỤJỤ NKE 10 Olee Otú Baịbụl Ga-esi Nyere M Aka?